“Arsenal waxay khiyaano ku sameeysay Ivan Perišić” – Luciano Spalletti – Gool FM
(Inter) 01 Feb 2019. Macalinka kooxda Inter Milan ee Luciano Spalletti ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahanka reer Croatia ee Ivan Perišić uu kala kulmay khiyaano ku aadan suuqa kala iibsiga kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal.
Luciano Spalletti ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah “Rai Sport” wuxuu ku sheegay:
“Waxaa jirta sheeko ku saabsan suuqa kala iibsiga, laakiin Ivan Perišić waa ciyaaryahan xirfadle ah ee fahamsan kaalintiisa, shalay wuxuu ku jiray xaalad kale”.
“Ciyaaryahanka waxa uu helay dalab cajiib ah, laakiin wuu ogaaday inuusan ahayn dalab dhab ah, wuxuu la kulmay khiyaano, sidaas ayuu dib ugu soo laabtay”.
“Haatan tababarku wuu sii bilaaban doonaa marka uu maskaxdiisa si buuxda dib ugu soo celiyo Inter, waxaan u ogolaaneynaa inuu ciyaaro”.
Intaas kadib Luciano Spalletti ayaa si kulul ugu weeraray hadalo uu sheegay agaasimaha guud ee kooxda Inter Giuseppe Marotta,kadib markii uu sheegay in Ivan Perišić uu xiiseenayo ka tagista garoonka San Siro.
“Ma aqaano hadii ay tahay fikrad fiican ama hadii kale, si aad u dhahdo Perišić wuxuu doonayo inuu baxo, lakiin ciyaaryahanka ayaa helay codsi muhiim ah, waxaana u sheegay inay u furan tahay, markii uu ogaaday in dalabku uusan ahayn sida uu u maleeyay, wuxuu go’aansaday in uu dib ugu soo laabto”.
Saxiixyadii ugu Waa waynaa ee ka dhacay YURUB Suuqa bisha Janaayo.....+SAWIRRO